Olee otú Mepụta Home DVD na Best Movie Ime Software
> Resource> Video> Movie Ime Software: Olee ka a na-emetụ n'ahụ Home Movie
Ndụ mara mma ma oge ijiji. Buo ndị oge ị na-achọghị ichefu, na-eme a n'ụlọ nkiri nwere ike ịbụ ezigbo echiche. The esonụ na paragraf nchegbu na-esi mfe ime na-emetụ n'ahụ DVD na fim ndị Fantashow, DVD Slideshow Builder Deluxe na Video Editor. Atọ ndị a omume bụ omume na-inwe-emeri nkiri onye software na ọtụtụ puku ndị eguzosi ike n'ihe ọrụ. Inwe eluigwe na ala ndakọrịta na nta ka ọ bụla dijitalụ camcorder ma ọ bụ faịlụ Ọkpụkpọ, ha eme ka i nwee ikpa niile ọkacha mmasị gị foto na video ka DVD ọsọ ọsọ na mfe.
Nkebi nke 1: Mee ka a Home Movie na Fantashow
Nkebi nke 2: Mee ka a Home Movie na DVD ngosi mmịfe Nrụpụta
Nkebi nke 3: Mee ka a Home Movie na Video Editor
Fantashow Bụ dijitalụ nkiri na-eme software na-ahapụ gị mfe ịmụta eme na-akpali akpali na desktọọpụ na mobile-enyi na enyi video slideshows iji gị onwe gị foto na vidiyo. Ebe a ka anyị hụ otú:
Nzọụkwụ 1 Sign ma na-ahọrọ ọkacha mmasị gị nkiri ịke
Download na ẹkedori Fantashow, mgbe ahụ, ịhọrọ site n'elu 200 pụtara nkiri ekwekọghị. Pịa ọkacha mmasị gị ịke ma na-etinye ya na-amalite na-eke gị onwe gị n'ụlọ nkiri.
Nzọụkwụ 2 hazie ịke
Kpọmkwem ịdọrọ na dobe gị foto ma ọ bụ vidiyo gaa na ẹbọ nke e etinyere na akụkọ osisi. Mgbe ahụ ịgbanwee gaa na dị iche iche thumbnails ịgbakwunye music, akụkụ na Intro / Ebe e si nweta. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwekwara ike ịgbanwe gị video ịke ma ọ bụ itinye ihe ekwekọghị mee ka gị na n'ụlọ nkiri ọzọ anya-akụta.
Nzọụkwụ 3 Export n'ụlọ gị gị na nkiri
Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na nkiri kere, gaa na 'Export "taabụ ịzọpụta gị n'ụlọ nkiri. Ị nwere ike ịkekọrịta ya ozugbo na YouTube ma ọ bụ Facebook, azọpụta ka dị iche iche mobile ngwaọrụ na formats ma ọ bụ ọkụ na-DVD.
DVD Slideshow Builder Deluxe Bụ ihe pụrụ iche nkiri onye na-enyere gị mfe eme fim na foto, videos na music, na-enye mmepụta nhọrọ nke DVD, video niile na ngwaọrụ na ngwa. Download software na-eso n'ọnụ n'okpuru na-atụgharị foto na vidiyo n'ime a na-emetụ n'ahụ n'ụlọ nkiri.
Nzọụkwụ 1 Import foto / video faịlụ
Ẹkedori DVD Onye kere ma họrọ gị mode si Standard mode na elu mode. Ebe a na-ewe Advanced Mode ihe atụ. E nwere ihe abụọ "Tinye Files" buttons na interface, pịa otu ọtutu ha ka ha tinye foto / video faịlụ, na hazie site Ịdọrọ na idobe.
Nzọụkwụ 2 hazie na mgbanwe, music na captions
Gaa hazie taabụ mee ka gị na nkiri pụrụ iche. Ị nwere ike hazie ndị ikwu n'ụzọ, mmetụta, ndabere music, ndabere image na ndị ọzọ. Ka ihe atụ, i nwere ike abụọ pịa dị foto ịgbakwunye captions, ma ọ bụ pịa Voice N'ime button idekọ gị onwe gị olu na-agwa foto akụkọ.
Nzọụkwụ 3 Preview na ike
Ugbu a ịgbanwee gaa na Mepụta taabụ ka ịhụchalụ gị nkiri na-eme ka DVD diski, ma ọ bụ chekwaa fim dị ka faịlụ na kọmputa. I nwekwara ike ozugbo bulite nkiri na YouTube ịkọrọ ndị ọzọ.
Home nkiri sample kere na DVD Slideshow Builder Deluxe
Video Editor Bụ a mfe na-eji n'ụlọ video edezi software na pụrụ iche edezi atụmatụ. Na ya, i nwere ike seamlessly Stitch ọnụ obere vidiyo, music & ederede, tinye mmetụta na-a ọkachamara-na-achọ n'ụlọ nkiri na nkeji. Ebe a bụ otú:
Nzọụkwụ 1 Import ma tinye media faịlụ
Iji mee ka a n'ụlọ nkiri iji Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), akpa gị mkpa mbubata videos, foto na audio ka album maka mgbe e mesịrị ojiji. Mgbe na-agba ọsọ software, họrọ 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 ruru, na a window dị ka n'okpuru ga gbapụta. Pịa Bubata iji họrọ videos, ọdịyo na foto site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Dezie ma hazie n'ụlọ gị gị na nkiri
Video Editor-Enyere gị aka mfe hazie nkiri.
Hazie aha, ikpuru na dobe a aha template ka ọnọdụ ị chọrọ ka ọ na-egosi elu ma hazie ya.
Iji tinye mmetụta, ịhọrọ site na 50+ video mmetụta, họrọ ya na-emetụta gị foto / videos ozugbo.
Iji tinye PIP, họrọ otu si template ma ọ bụ gị onwe gị foto collection na ikpuru ka PIP usoro iheomume. Ebe a, ị nwekwara ike mfe ike Foto dị na-na-Foto dị mmetụta.
Iji tinye ikwu n'ụzọ, ikpuru na dobe a mgbanwe template ka video / foto, ma ọ bụ nri pịa ya itinye All.
Iji tinye Intro / Ebe E Si Nweta, bulie gị chọrọ template, ịdọrọ ya n'etiti abụọ ọ bụla Obere vidiyo.
Nzọụkwụ 3 Save na ịkekọrịta nkiri
Mgbe na-eme n'ụlọ nkiri, pịa "Mepụta" bọtịnụ na n'etiti nri nke usoro ihe omume window, ị ga-enwe nke nhọrọ mbupụ nkiri. Ka ihe atụ, i nwere ike ịzọpụta ya na kọmputa gị ma ọ bụ bugoo YouTube, nakwa dị ka ọkụ ya DVD.
Ị na-ahụ na ọ bụ na mfe ime n'ụlọ DVD fim na atọ DVD nkiri eso. Họrọ otu dị ka gị mkpa na-eme ka a nkiri ugbu a!
Top 20 Best Isi Iyi Ịlụ Background Music maka Videos (Free Download)
Video Editor Download: Best Video edezi Software